» गाला राउण्डका उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरु, भाग–२
गाला राउण्डका उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरु, भाग–२
१५ माघ २०७६, बुधबार १२:५२
मकवानपुर, १५ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलमा अहिले गाला राउण्ड चलिरहेको छ । गाला राउण्डको शुक्रबार प्रसारित एपिसोडमा उत्कृष्ट १२ मध्ये प्रस्तुति दिन बाँकी रहेका ६ जना प्रतियोगीहरुले प्रस्तुति दिईसकेका छन् । उक्त एपिसोडमा मेघा श्रेष्ठ, मिङ्मा लामा, केविन ग्लान तामाङ, नेशन पुन मगर, मुस्कान रानाभाट र किरण कुमार भुजेलले प्रस्तुति दिएका थिए । यस भिडियो सिरिजको दोस्रो भागमा उपाधी दाबेदार मानिएका यी छ प्रतियोगीहरु र उनीहरुको प्रस्तुतिका बारेमा चर्चा गरिएको छ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
शुक्रबारको पहिलो प्रस्तुति नेपाल आईडलकी एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा श्रेष्ठले दिएकी थिईन् । उक्त प्रस्तुतिबाट मेघाले बर्जर ग्लामर मोमन्ट अफ द विक अवार्ड समेत जित्न सफल भएकी छिन् । शुक्रबार भएको प्रस्तुतिमा मेघाले आफ्नो जेनरभन्दा फरक जेनरको गीत गाएर निर्णायक र दर्शकहरुको मन जितेकी छिन् । प्राय रक जेनरको गीत गाउने गरेकी मेघाले शुक्रबार स्वर सम्राट नारायण गोपालको गीत गाईन् । ‘पर्खी बसेँ’ बोलको गीत गाएकी मेघालाई तिनै जना निर्णायकहरुले सकरात्मक कमेन्ट गरे । विशेष अतिथि जेम्स प्रधानले उनको उक्त प्रस्तुति सँगै थप अर्को प्रस्तुति पनि हेरेपछि उनीसँगै भविष्यमा कुनै गीत कम्पोज गर्ने बताए र स्टाण्डिङ अवेशन दिए । मेघाको भोटिङ कोड एनआई ०५ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०५ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
मेघा श्रेष्ठ नेपाल आईडल सिजन ३ को एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता हुन् । २४ वर्षीया मेघा काठमाडौँ बसुन्धारा निवासी हुन् । मेघा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दाको समयदेखि नै सँगीत क्षेत्रमा सक्रिय थिईन् । त्यस समयमा नै ब्याण्ड प्रस्तुतिका क्रममा स्टेजमा उत्रने गरेको उनी सम्झन्छिन् । अहिले पुरानो विद्यालयमा जाँदा समेत उनको चर्चा हुन्छ । शिक्षकहरु र उनका सहकर्मीहरु अझै पनि मेघाको आवाजको पारखी छन् । संगीतलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अंग भन्न रुचाउने मेघा ‘उमन ईन कन्सर्ट ट्यालेन्ट हन्ट २०१६’को विजेता समेत हुन् । उनी आफ्नी आमालाई जीवनको पिल्लरको रुपमा परिभाषित गर्छिन् । उनको संगीत यात्रामा उनको आफन्तको पनि साथ छ । मेघाको हजुरबुवा विभिन्न बाजाहरु बजाउन सिपालु छन् । एकप्रकारले साँगितिक परिवारमै मेघा हुर्किएकी हुन् । मेघालाई उनकी आमाले नै नेपाल आईडलमा भाग लिन प्रेरणा दिएकी हुन् । फुडमाण्डुमा कार्यरत मेघाले औपचारिक अध्ययन समेत पुरा गरिसकेकी छिन् ।
शुक्रबारको दोस्रो प्रस्तुति हेटौँडाकी मिङ्मा लामाले दिएकी थिईन् । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएकी मिङ्माले शुक्रबार अचानक आफ्नो धार परिवर्तन गरिन् । रक स्टारको छवि बनाएकी मिङ्मा लामाले शुक्रबार मेलोडियस प्रस्तुति दिएर ‘मेलोडी क्वीन’ को रुपमा आफुलाई उभ्याएकी छिन् । डिजिटल अडिसनमार्फत नेपाल आईडलमा भित्रिएकी मिङ्मा लामाले नेपाल आईडलको थिएटर राउण्ड अन्तर्गत बेस क्याम्पमा योगेश्वर अमात्यको आवाजमा रहेको ‘लैजा चरी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाजमा फिमेल भर्सन सुन्न पाउँदा निर्णायकहरु निक्कै खुशी भएका थिए । त्यसपछि पियानो राउण्डमा फेरि उनले अर्को रकिङ प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उक्त राउण्डमा उनले चर्चित गायक दिपक बज्राचार्यको ‘ओ अमिरा’ बोलको गीत गाईन् । यो फिमेल भर्सन पनि नेपाल आईडलको स्टेजमा रकिङ प्रस्तुति हुन पुग्यो । मिङ्माले पियानो राउण्डमा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द उईक अवार्ड समेत जितेकी थिईन् । पियानो राउण्डसम्म रक स्टारको रुपमा चिनिएकी मिङ्माले उत्कृष्ट १२ मा परेसँगै गाला राउण्डमा आफुलाई ‘मेलोडी क्वीन’ को रुपमा उभ्याईन् । उनले सुक्मित गुरुङको आवाजमा रहेको ‘पल पल तिम्रै’ बोलको गीत गाएर विशेष अतिथि जेम्स प्रधान र तिनै जना निर्णायकहरुलाई मन्त्रमुग्ध बनाईन् । निकै भावनात्मक देखिएकी मिङ्माको आवाज र गीतको महशुसमा सबै दर्शकहरु समेत हराए । नेपाल आईडल सिजन ३ मा रकिङ प्रस्तुति दिँदै मेलोडी क्वीन बनेर चर्चामा आएकी अर्की मिङ्मा हेटौँडा निवासी हुन् । उनी २१ वर्षकी छिन् । स्केचेच ब्याण्डमा आवद्ध मिङ्मा काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरुमा गीग समेत गर्छिन् । साँगितिक आकासमा चम्कँदै गरेकी मिङ्माले केही गायन प्रतियोगिताहरुमा भाग लिनुका साथै केही कभर तथा ओरिजिनल गीतहरु समेत गाएकी छिन् ।
मिङ्माको भोटिङ कोड एनआई ०६ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०६ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
शुक्रबारको तेस्रो प्रस्तुति चितवनका केविन ग्लान तामाङले दिएका थिए । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएका केबिनले गाला राउण्डमा पुगेपछि थप चर्चा कमाएका छन् । शुक्रबार प्रस्तुति दिएका उनलाई विशेष अतिथि र तिनै जना निर्णायकले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका छन् । रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स दिएका केविनले ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमर अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका छन् । अवार्डसँगै उनले नगद २० हजार रुपैयाँ समेत जित्न सफल भएका छन् । शmुक्रबार केबिनले ‘द स्याडोज नेपाल’ को ‘खेलाडी हुँ म’ बोलको गीत गाएर तहल्का मच्चाएका थिए । विशेष अतिथि र तिनै जना निर्णायकहरुले केबिनको प्रस्तुतीको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । केविनको भोटिङ कोड एनआई ०२ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०२ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाल आईडल सिजन ३ मा धमाका मच्चाउन सफल प्रतियोगी हुन् केविन ग्लान तामाङ । दमदार प्रस्तुतिका कारण चर्चामा रहेका केविन चितवनको पर्सा निवासी हुन् । उनी २२ वर्षका छन् । सानैमा आफ्ना दाजुहरुले गीतार बजाएको देखेर केविन संगीतमा आकर्षित भएका हुन् । पढाई र सँगीतलाई सँगै अगाडि बढाएका केबिनलाई बुवाले उपहार दिनुभएको गीतारले थप प्रगति गर्न हौस्यायो । गायक स्वप्निल शर्मालाई आईडल मान्ने केबिनले सँगीतको यात्राकै क्रममा ‘शास्त्र’ नामक ब्याण्ड जोईन गरे । त्यस ब्याण्डमा केही वर्ष बिताएका केबिन र उनको टिमले पछि अक्टेब ब्याण्ड स्थापना गर्यो । उनी गत ५ वर्षदेखि सोही ब्याण्डमा आवद्ध छन् । विभिन्न स्थानमा गीगहरु गर्दै आएको ब्याण्डलाई उनी निकै माया गर्छन् । ब्याण्डका साथीहरुले उनको अभ्यासका लागि निकै सहयोग समेत गर्दै आएका छन् । म्युजिकलाई आफ्नो प्यासन बताउने उनी सोही प्यासनलाई करियरका रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छन् । उनले बिरगञ्ज अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड समेत जितेका थिए ।
शुक्रबारको चौथो प्रस्तुति पोखराका नेशन पुन मगरले दिएका थिए । उनले बिपुल क्षेत्रीको आवाजमा रहेको ‘डढेलो’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिका क्रममा केही कन्फ्युज जस्तो देखिएको भएता पनि उनको प्रस्तुति राम्रो रहेको निर्णायकहरुले बताए । नेशनको भोटिङ कोड एनआई ०८ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०८ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधि दाबेदारका रुपमा हेरिएका नेशन पुन मगर पोखराका हुन् । दमदार आवाजका कारण चर्चा कमाउन सफल नेशन २० वर्षका छन् । दोस्रो सिजनमा समेत सहभागी भएका उनले पोखरा अडिसनबाट बर्जर ग्लामर पर्फोमर मोमेन्ट अफ द डे पनि जितेका थिए ।
शुक्रबारको पाँचौँ प्रस्तुति पोखराकी मुस्कान रानाभाटले दिएकी थिईन् । उनले कर्ण दासको आवाजमा रहेको ‘अनौठो ब्यथा’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । रकिङ प्रस्तुति दिने गरेकी मुस्कानको यो फरक धारलाई पनि निर्णायकहरुले मन पराएका थिए । सबै निर्णायकहरुले उनको प्रस्तुतिमा सकरात्मक कमेन्ट गरेका छन् । मुस्कानको भोटिङ कोड एनआई ०७ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०७ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाल आईडल सिजन ३ मा फरक प्रस्तुतिहरु दिएर चर्चामा आएकी प्रतियोगी हुन् मुस्कान रानाभाट । उनी पोखरा अडिसनबाट छानिएकी हुन् । उनी २२ वर्षकी छिन् । संगीत विषयमै स्नातक अध्ययन गरिरहेकी मुस्कान अहिले तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछिन् । ९ वर्षको उमेरमा नै ‘बेबी मुस्कान’ नामक एल्बम निकालेकी मुस्कान सानै उमेरदेखि सँगीतको क्षेत्रमा लागेकी हुन् । आफु सहभागी भएको कुनै पनि साँगितिक कार्यक्रममा प्रथम हुने गरेकी मुस्कानलाई उनका परिवारले पनि संगीतमै करियर बनाउन मदत गरेका छन् । नेपाल आईडलको पहिलो र दोस्रो सिजनमा समेत भाग लिने ईच्छा गरेकी मुस्कान अन्ततः तेस्रो सिजनमा संगीतको शिखर पुग्ने दौडमा होमिएकी छिन् ।
शुक्रबारको अन्तिम प्रस्तुति बर्दिबासका किरण कुमार भुजेलले दिएका थिए । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ चलचित्रको ‘भन्छु आज मनका कुरा’ बोलको गीत गाएका किरण स्टेजमा निकै रोमान्टिक देखिए । उनले प्रस्तुतीकै क्रममा निर्णायक ईन्दिरा जोशीलाई गुलाफको फुल दिए । किरणले दिएको गुलाफलाई ईन्दिराले शिरमा सिउरिईन् । यससँगै थप रोमान्चक बनेको उनको प्रस्तुतिलाई निर्णायकहरुले निकै मन पराए । निर्णायक ईन्दिारा जोशीले उनको प्रस्तुतिको प्रशंसा गरिन् भने निर्णायक न्ह्यु बज्रचार्यले उनको प्रस्तुतिलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रस्तुति भएको बताए । उनले किरणको प्रस्तुतिलाई स्टाण्डिङ अवेसन समेत दिए । विशेष अतिथि जेम्स प्रधानले किरणलाई गायकका साथै रियल पर्फोमर समेत भनेका थिए । २६ वर्षीय किरण महोत्तरीको बर्दिवास निवासी हुन् । अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरण आफुलाई अझै निखार्दै संगितको शिखरतिर अग्रसर छन् ।
किरणको भोटिङ कोड एनआई ०३ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०३ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।